EYEZIQALO 21 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
EYEZIQALO 21EYEZIQALO 21
211*UNdikhoyo wamenzela isisa uSara ngokuthi asizalisekise isithembiso sakhe. 2USara wakhulelwa,Hebh 11:11 waza wazala umntwana oyinkwenkwe, sele aluphele uAbraham. Wamzala kanye ngelaa xesha wayelixelile uThixo. 3Wamthiya igama loo mntwana uAbraham, wathi nguIsake.Oko kukuthi “uWahleka” 4Uthe ke akuba ntsuku zisibhozo ezelwe, wamalusa uAbraham ngokomyalelo kaThixo.ZiQalo 17:12; Mseb 7:8 5UAbraham wayeselenekhulu leminyaka ukuzalwa kukaIsake. 6Wada wathi uSara: “UThixo undenze ndakwazi ukuhleka, yaye wonke ubani oyivayo le nto wohleka kunye nam.” 7Uqokele wathi: “Ibingubani kakade obenokuthi kuAbraham ndiza kuba ngumdlezana owanyisayo? Naku ke kodwa ndizele umntwana wakhe, eyinkothovu yexhego enjalo!”
8Lwakhula usana lwada lwalunyulwa. Wenza elikhulu lona itheko uAbraham ukulunyulwa kwaloo mntwana.
Ukugxothwa kukaHagare noIshmayeli
9Ngaminazana ithile uSara wabona umntakaHagare umJiputakazi, lowa uHagare wamfumana kuAbraham, edlala ngoIsake.Okanye “edlala noIsake” 10Waya kuthi kuAbraham: “Wethu, sikhuphele ngaphandle esi sicakazana kunye nomntwana waso. Andiyi kuyivumela yona into yokuba lo mntwana wesi sicakazana sahlulelane ngelifa kunye noIsake umntwana wam!”Gal 4:29-30
11Le nto yamkhathaza gqitha uAbraham, kuba noIshmayeli lowo wayengumntwana wakhe. 12Wavakala esithi uThixo kuye: “Hayi, sukuzikhathaza ngenxa yalo mntwana nesicakazana sakho. Yenza loo nto ithethwa nguSara wena, kuba kaloku abazukulwana bakho boba yinzala kaIsake.Roma 9:7; Hebh 11:18 13Ewe, nonyana wesicakazana lo uya kuzala isizwe esikhulu, kuba kaloku naye ngumntwana wakho ncam.”
14Kwakusasa ngengomso uAbraham wavuka wathatha ukutya kunye nentsuba ezele ngamanzi, wazinika uHagare, wamthwalisa, wathi makahambe nomntwana wakhe. Wemka ke uHagare, wahamba ebhadula kuloo ntlango iyiBheshebha. 15Akuphela amanzi awayewaphethe, wamqhusheka etyholweni umntwana, 16wemka wathi qelele, wahlala phantsi. Watsho esithi: “Andinakuyinyamezela into yokubona umntwana wam esifa.” Uthe ehleli apho zehla iinyembezi.
17UThixo wamva ekhala umntwana, kwavakala ilizwi lesithunywa livela ezulwini, lisithi kuHagare: “Ukhathazwa yintoni, Hagare? Sukoyika. UThixo umvile umntwana wakho kulaa ndawo umbeke kuyo. 18Hamb' uye kumthatha umthuthuzele. Úya kuba ngunozala wesizwe esikhulu.” 19UThixo wawavula amehlo kaHagare, nako kubonakala umthombo. Waya kuzalisa loo ntsuba, waseza nomntwana wakhe. 20-21UThixo wamgcina loo mntwana, wakhula ehlala kuloo ntlango yaseParan. Waba yincutshe yomzingeli. Unina wamthathela intombi engumJiputakazi.
Imvumelwano ka-Abraham noAbhimeleki
22Ngelo xesha kwafika uAbhimelekiZiQalo 26:26 ehamba noPikoli umphathi-mkhosi, wathi kuAbraham: “Yonke into oyenzayo inesandla sikaThixo kuyo, Abraham. 23Ngoko ke khawufunge ngoku apha phambi koThixo ukuba akusokuze undixokise mna nabantwana bam kunye nabazukulwana bam. Mna ndinyanisekile kuwe, nawe ke ndithembise ukuba uya kunyaniseka kum nakubemi beli lizwe uhlala kulo.”
24UAbraham wathi ukuphendula: “Ndiyathembisa.”
25UAbraham wavakalisa kwanesikhalazo awayenaso kuAbhimeleki, esiphathelele nomthombo owahluthwa zizicaka zika-Abhimeleki. 26Wathi uAbhimeleki: “Bendingazi ukuba ukho owenze loo nto; nawe ngokwakho akuzange wandixelela nokundixelela. Ndiyaqala namhlanje ukuyiva into enjalo.”
27UAbraham ke wakhupha iinkomo neegusha, wazinika uAbhimeleki, baza benza imvumelwano. 28UAbraham wakhetha amatakane asixhenxe kuloo mhlambi, 29waza uAbhimeleki wathi kuAbraham: “Ngawantoni la matakane asixhenxe uwakhethileyo?”
30Wathi uAbraham: “Wathathe la matakane asixhenxe. Ngokwenjenjalo ungqina ukuba lo mthombo wembiwa ndim.” 31Yaba ke loo ndawo kuthiwa yiBheshebhaOko kukuthi “umthombo wesifungo” okanye “umthombo wesixhenxe” ukubizwa kwayo, kuba kaloku kulapho loo madoda avumelana khona efunga.
32Emva koko uAbhimeleki noPikoli babuyela kwakwelamaFilistiya. 33UAbraham watyala umthi apho eBheshebha. Apho ke wamnqula *uNdikhoyo uThixo uSonini-nanini. 34Wahlala kwelo lizwe lamaFilistiya ixesha elide.